Weerarka Turkiga ma wuxuu abuurayaa khatar ay Daacish ku soo noolaato? - BBC News Somali
Weerarka Turkiga ma wuxuu abuurayaa khatar ay Daacish ku soo noolaato?
Image caption Dabley ka tirsan xoogagga kurdiyiinta ee SDF oo iska caabbinaya dagaalka Turkiga
Haa, suuragal ayey noqon karta waa jawaabta gaaban oo su'aashaa laga bixin karo. Kooxaha jihaad doonka ah sida ururka isku magacaabay Dowladda islaamiga ee IS iyo al-Qaacida iney dib u billaabaan dagaalladi ay joojiyeen. Taasoo uga sii dari karto gobol ay nabaddiisu marki horaba luga badan ku taagneyn.
Balse saameynta dagaalakaasi ka dhalan kara ayaa la sheegayaa iney ku xiran tahay gunta dagaalka iyo sida uu u daba dheeraado.
Ururka Daacish ayaa deegaanki ugu dambeeyey uguna yaraa oo gacanta ugu jiray oo ku yaalla Baguz ee dalka Suuriya laga fara maroojiyey bishi March ee sanadkan.
Balse ilaa iyo hadda waxaa sii nool dagaallamayaal ururkaasi ka tirsan oo ay badankoodana xabsiyada ku jirin. Waxayna kooxdu billaabeen iney dagaallo dhuumaaleysi iyo weerarro gaadma ah sida weerarki ay toddobaadkan ku qaadeen Raqa oo uu mas'uuliyadda weerarkaasi ururku IS sheegtay.
Waqooyiga-bari ee Suuriya oo horay u ahaa deegaan ay ku xoog badnaayeen ururka Daacish, waxaa awooddi daacish uu ku lahaa deegaannadaasi wiiqay xoogagga maleeshiyada Dimuqraadiga Suuriya ee SDF oo kurdiyiinta u badan oo dagaal qaraar IS la galay iyaga oo garab ka helayo ciidamada gaarka ah ee Mareykanka.
Balse hadda deegaannadi ay xoogagga kurdiyiinta SDF gacanta ku hayeen waxaa gudaha u galay ciidama xoog badan oo uu Turkigu leeyahay, waxaa isbeddelaya gacan ku haynti kurdiyiinta ee deegaannadaasi.
Kurdiyiintuna halka ay macabiista ay ka qabsadeen IS ee xabsiyadooda ku jiray ee aan xukunneen ayna diideen waddamadi ay ka yimaaddeen iney kala wareegaan ay ilaalin lahaayeen waxay door bidayaan iney iska difaacaan weerarka ay cidamada Turkiga ku hayaan.
Khatarta ka iman karta macabiistaasi oo xabsiga ka fakata
Laba khatar ayaa la sheegayaa iney halkaasi ka dhalan karaan. Tan koobaad waa iney macabiista xabsiga jabsadaan oo ay xabsiga ka baxsadaan dadka xabsiga SDF uu gacanta ku haya waxaa ku jira oo lagu qayaaso 12,000 oo ka tirsan dagaallamayaashi Daacish ama IS. Sida oo kalana xerooyin xabsiga ka madax bannaanna sida xerada Al-hol waxaa ku jira 70,000 qof oo daacish horay uga tirsanaa.
Xubnaha iyo taageerayaasha IS haddii ay helaan fursad yar oo u saamaxdo iney dagaal dib u billaabaan waxaa laga cabsi qabaa iney dib weerarradi ay waaya aragnimada u lahaayeen balse ay tabarta u waayeen ay dib u billaabaan.
Haddaba waxaa isa soo taraya cabsida ay hay'adaha sirdoonka ka muujinayaan arrinta ah in xubnaha iyo taageerayaasha daacish dib looga celiyo ama ay qaabilaan waddamadi ay asal ahaan ka soo jeedeen ay keeni karto iney dib weerarro uga fuliyaan sida weerarradi ay ka fuliyeen London, Paris, Barcelona iyo meela kale.
Haddaba, waxaa eedda iney dusha iska saaraan ay tahay waddamada reer galbeedka laftooda. Inti u dhaxeysay 2014-2019 howlgalka uu hoggaaminayey Mareykanka oo ay ka qayb qaateen ku dhawaad 70 dal ayaa waxay billaabeen dagaallo ka dhan ah khaliifada IS oo ay sheegeen iney howlo aragagixiso ka wadeen dhul aan bad ahaan ka weyneyn badka dalka belgium.
Labada qof ee IS ka tirsan ee sida gaarka dunida oo dhan ay u dooneyso waxaa ka mid ah El-Shafee Elsheikh iyo Alexandar Kotay oo labaduba ka yimid magaalada London ayaa waxay ku jiraan xabsiga ay Kurdiyiintu gacanta ku hayaan ee ku yaalla waqooyi-galbeed ee dalka Suuriya ilaa iyo marki ay gacanta ku soo dhigin xoogagga Kurdiyiinta ee SDF.
Khatarta dib u soo kabashada
Dagaallamayaasha SDF ayaa qaybta ugu weyn ku lahaa in la jabiyo IS. Ciidamada cirka Mareykanka iyo Kooxa Shiica ah oo gacan saar la leh Iran ayaa door aan yareeyn iyaguna ku lahaa dagaalki muddo shan sana ah lagula jiray Daacish oo ka socday Waqooyiga Suuriya iyo Ciraaq.
Kooxaha Jihaad doonka ah awooddoodi waa la wiiqay xoogga ay lahaayeen iyo dhulki ay gacanta ku hayeenba waa laga qabsaday maleeshiyaadkoodi ugu badnaana xabsiyada ayey ku jiraan.
Hase yeeshee, waxay weli ka sii jiraan oo ay dagaalo ka wadaan qaybo ka mid ah dalalka Soomaaliya, yemen, galbeedka Afrika iyo deegaanno ay qabiishu ku xooggan yihiin oo ku yaalla Ciraaq iyo Suuriya.